laser Denim egeza lokuqopha - Wuhan Golden Laser Co., Ltd
laser Denim egeza umbhalo
Denim Laser Ukugeza eqopha Solutions
Jeans / T-Shirt / nezingubo / Jacket / Corduroy
Yini laser egeza lokuqopha ukuyenza?
Denim abathile umbhalo / Whisker / Monkey ukugeza / wesilinganiso / waklebhula / ngomumo-to-ukugqoka 3D lokuqopha okudala
I innovation ka jini egeza umkhakha - jini laser umbhalo , lona liye laba yitshe ubuchwepheshe amakhulu eYurophu.
Denim uhlelo laser wokuwasha digital futhi othomathikhi ukucutshungulwa imodi. Ngeke nje bona isandla ibhulashi, udevu, inkawu ukugeza, waklebhula bendabuko inqubo ukukhiqizwa, kodwa futhi zisebenzisa laser etch imigqa, izimbali, ubhekene, izincwadi kanye nezibalo, okubonisa imiphumela zokudala. Ngeke nje bona batch ukucutshungulwa ziwashwa, kodwa futhi ukuhlangabezana mkhuba emakethe ye ngezifiso encane batch ngokwezifiso.
Denim Laser Geza
Traditional Hand Ibhulashi
Omunye umshini indawo abasebenzi abahlanu. Umshini kuyinto okuzenzakalelayo ngokugcwele futhi esebenza kahle.
A ezihlukahlukene izinqubo eziyinkimbinkimbi kakhulu, njengezinga udevu, udevu 3D, inkawu ukugeza, umyela, waklebhula, futhi noma iyiphi imiklamo yokudala, nje-laser ukuze kalula uthole.
Phendula ngokushesha ukuze intuthuko entsha umkhiqizo, futhi lo mkhuba ilawulwa ngesikhathi sangempela.
Traditional imisebenzi yezandla, izinga kunzima ukulawula. Umkhiqizo laser umbhalo eseqedile kunomphumela uhambisane kakhulu, izinga olunembile futhi uzinzile.
kunciphise nezindleko okuphansi
ubuchwepheshe European, nisekeliwe okuthembekile, sakugcina yesondlo izindleko, badinga kuphela 7 kWh ngehora.
GOLDEN Laser - Laser uhlelo egeza lokuqopha kuyisinqumo esingcono kakhulu ukukhulisa inzuzo kwemikhiqizo jini Indwangu.
Energy ukonga imvelo
izinqubo Traditional kudle isamba esikhulu reagents zamakhemikhali, izona amaningi abangela sadlala amanzi, kanye indle kukhishelwa kuyingozi imvelo. Laser egeza uqeda imiphumela ehlukahlukene jeans ngendlela kakhulu elula, ekuthuthukiseni zokusebenza imvelo, kwagezi nokuvikelwa kwemvelo.
Laser egeza ihlanganisa nabanye zindlela ezivamile ukwakha eliyingqayizivele ephezulu Boutique jini.
Laser uhlelo egeza lokuqopha kuholela hhayi kuphela jini imboni lehlanganisa tinhlelo, kodwa futhi okudlula izicelo ezifana isikhumba, jackets, izikibha, nezingubo corduroy, futhi nokusebenza abanzi yendwangu lezigqoko izinto ezihlukahlukene. 2D / 3D lokuqopha okudala umphumela sithuthukisa ezibanzi ukubaluleka isikhala komkhiqizo.
Laser Ukugeza eqopha System
LOKHU laser ukuwasha eqopha UHLELO IS Ngokukhethekile athuthukile JEANS KANYE Denim izingubo eqopha.
Denim laser ukugeza oqoshiwe uhlelo, ukusebenza yayo isimiso ukusebenzisa ikhompyutha ukuklama, isakhiwo, futhi wenze PLT noma BMP amafayela, bese usebenzisa CO2 laser lokuqopha umshini ukwenza laser ugongolo lokushisa eliphezulu etching phezu isembatho Indwangu ulandele iziyalezo ezikuyo ikhompyutha . I ntambo ngaphansi lokushisa eliphezulu etching is ablated, udayi is vaporized, futhi ekujuleni ezahlukene etching akhiwa ukukhiqiza iphethini noma ezinye umphumela okugeza kuwo. Lezi amaphethini kungabuye ukuhlotshiswa ngendwangu efekethisiwe, sequins, ayina, nensimbi izesekeli ukuthuthukisa umphumela wobuciko.
Okuningi mayelana lo mkhiqizo
Professional software, lula ukusebenza, kulula ukuguqula ihluzo nganoma yisiphi isikhathi.